Hira 42: Vavaky ny Mpanompon’Andriamanitra | Hira ho An’i Jehovah
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bassa (Cameroun) Bichlamar Bicol Boligara Boulou Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Douala Espaniola Fidjianina Fon Frantsay Ga Goun Grika Guarani Hiligaynon Holandey Hongroà Ibinda Icibemba Iloko Iokrenianina Islandey Italianina Karen (S'gaw) Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mapudungun Masedonianina Myama Ndau Ndebele Ngangela Nias Norvezianina Nzema Oromo Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persianina Pidgin (Cameroun) Poloney Ponape Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Samoanina Sena Serba Serba (Soratra Romanina) Shona Silozi Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tshiluba Twi Télougou Wolaita Yorobà Éwé
Vavaky ny Mpanompon’Andriamanitra
1. Jehovah ô, Ray any ambony any,
Ny anaranao ho masina eran-tany.
Mahatonga ianao, tsy toha, mahagaga,
’Zay kasainao dia tsy maintsy hitranga.
Ary ilay Fanjakanao,
Enga anie ho tonga izao!
2. Misaotra anao satria mbola miaina,
Ary isan’andro omenao ’zay ilaina.
Avy aminao koa ny fahendrena,
Ny fahalalanao no tena harena.
Koa misaotra anao satria
Ianao, Ray ô, tena tia.
3. Ny fahoriana toa mahery fiavy;
Mba mila anao, marefo ka miangavy.
Ampaherezo anie f’aza afoy,
Mba tsy ho kivy, fa mbola hanohy;
Ampio ’zahay hanohy ny ady,
Ary hanefa an’ilay voady.
(Jereo koa ny Sal. 36:9; 50:14; Jaona 16:33; Jak. 1:5.)
Vavaky ny Mpanompon’Andriamanitra (Hira 42)